Madaxweyne Farmaajo oo Cambaareyay Weerarkii Dadka badan lagu laayay ee ka dhacay Hotelka Las Vegas ee Mareykanka – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweyne Farmaajo oo Cambaareyay Weerarkii Dadka badan lagu laayay ee ka dhacay Hotelka Las Vegas ee Mareykanka
By Maxamuud Axmed	 On Oct 3, 2017
Warsaxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya oo ku Qornaa luqada Engilsih-ka ayaa lagu cambaareeyay Weerarkii Shalay ka dhacay Magaalada Las Vegas ee Dalka Mareykanka ee Sababay Dhimashada Dadka ka badan 58 Ruux iyo Dhaawaca 400 oo kale islamarkaana uu geystay Nin ka mid ah dadka Magaalada Las Vegas oo 64 Sano jir ah.
”Ainigoo ku hadlaya Magaceyga iyo Magaca Ummadda Soomaaliyeed, waxaan Tacsi Tiiraanyo leh u dirayaa Qoysaska Dhibaneyaasha ah ee Dhibaatadu ay ka soo gaartay Weerarkii Argagaxiso ee ka dhacay Magaalada Las Vegas ee Dalka Mareykanka”. ayuu yiri Maxamed C/llaahi farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya
Qoraalka ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaan Xanuunka soo gaaray Qoysaska iyo Saaxiibada ku wax noqday Weerarkii Fulaynimada ahaa ee lagu qaaday dadkii ku sugnaa Hotel ku yaala Magaalada Las Vagas ee dalka Mareykanka.
Dhanka kale Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Weerarka lagu dilay dadka ka badan 50 Qof kuna tilmaamay fal Sheydaanimo, wuxuuna sheegay in hoos loo dhigi doono Calanka Mareykanka si loo muujiyo in dadkii ay waxyeeladu gaartay la garab istaago.
The post Madaxweyne Farmaajo oo Cambaareyay Weerarkii Dadka badan lagu laayay ee ka dhacay Hotelka Las Vegas ee Mareykanka appeared first on Ilwareed Online.
Somalia statement of the heinous act of terror in Las Vegas
Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda magaalada Khartoum ee dalka Sudan